Tag: bhizinesi remuno | Martech Zone
Tag: bhizinesi remuno
Chipiri, July 11, 2017 Douglas Karr
Mia, kubva kuSignpost, anoongorora dhata pamamiriyoni evatengi kuti vawane mikana mitsva yekutumira meseji chaiyo panguva yakakodzera. Iyi AI-based tekinoroji inogadzira maemail uye zvinyorwa izvo vatengi vako vanopindura kwazviri, zvichiwedzera kutengesa kwako ne10% uye kukwidza yako yekutarisa chiyero neinenge mbiri nyeredzi paavhareji. Mia inosvika kune vatengi kuti vaone kana vangakurudzira bhizinesi rako uye, kana vakati hongu, anotevera chiyeuchidzo chekubva
Isu tichangotanga kushanda naAngie's Chinyorwa uye zvave kutovhura maziso kwatiri kuti mangani mabhizinesi anowana anotungamira kuburikidza neawo ratings, ongororo uye madhiri. Kune emabhizinesi emuno anopa vatengi vavo basa rakakura, wongororo dzakabhadharwa paAngie's Chinyorwa imari yakachena. Sekureva kweDiki Bhizinesi Kutsvaga Kushambadzira Ongororo neAmerican Express OPEN, mabhizimusi madiki eUS anogona kutarisira kutaura-kwemuromo senzira yepamusoro yekuti vatengi vazviwane.